FAHANTRANA SY FIDANGAN’NY VIDIM-PIAINANA : Tratran’ny tsy fahaizan’ny mpitondra sy ny lainga afafiny ny Firenena | NewsMada
Marobe ny Malagasy no tsy mahatakatra vary amin’ny kilao.
Mihamafy hatrany ny fidangan’ny vidim-piainana. Miezaka ny mitondra vahaolana ny fitondrana, amin’izao fotoana, mba hialokalofana sy hanalana ny fanaintainan’ny vahoaka. Samy mizaka ny lainga afafin’ny mpitondra ny rehetra manoloana ny tsy fahaiza-mitantana ny firenena…
Mihatra amin’ny akalan’ain’ny Malagasy ny fiakaran’ny vidim-piainana ankehitriny. Miezaka ny manarina ny lainga afafin’ny filoham-pirenena amin’ny fidangan’ny vidim-piainana izao, ireo mpitondra. Efa tsy takatry ny fahefa-mividy intsony ireo entana maro isan-karazany, izay ilaina amin’ny andavanandro, indrindra ny vary. Raha ny vaovao farany, tafakatra hatrany amin’ny 1700 ariary ka hatramin’ny 2000 ariary ny kilaon’ny vary, amin’izao fotoana izao. Fanamaivanana ny toe-java-misy fotsiny no ataon’ny fitondram-panjakana, manoloana ny fahasarotam-piainana miseholany etsy sy eroa ity. Ny farany herinandro teo, nilaza ny minisitry ny Varotra fa nanafatra vary 40.000 taonina isika ary efa tonga ao amin’ny seranan-tsambon’i Toliara io. Raha io vary nafarana io, hita fa ampy tsara ahafaha-miatrika ny taon-tsarotra, raha 25.000 taonina isam-bolana no afaran’ny mpandraharaha.
Fepetra maro no noraisin’ny teo anivon’ny filankevitry ny minisitra, izay notarihin’ny filoham-pirenena, hoentina hanamaivanana ny fiakaran’ny vidim-bary, nanomboka ny volana febroary no ho mankaty. Ny 3 febroary teo, niezaka nikiry ny hanara-maso ny angom-barin’ireo mpamongady ary nidina ifotony teny amin’ny ladoany mihitsy ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, hijery ny fandehan’ny fikarakarana ity resaka vary ity. Efa manomboka mimonomonona ny mpanjifa amin’ny fidangan’ny vidim-bary, izay mihoa-pampana tokoa satria efa mihoatra ny 2000 ariary ny vidiny. Manampy trotraka ny fiakaran’ny vidin-tsolika, izay nanodidina ny 120 ariary fiakaran’ny gazoala, raha 160 ary kosa ny lasantsy, mitaha ny vidiny teo aloha.
Mirehareha ho mahavita tena
Ny septambra 2016, raha nivahiny tamin’ny fahitalavitra frantsay tany Paris, ny filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery, nirehareha fa mahavita tena eo amin’ny lafiny fambolena. Notsiandriany mafy tao anatin’ny resany ny any Atsimon’ny Nosy, tamin’ny fanorenana ny tohodrano, izay ahafaha-manondraka anarivony hektara. Nohitsiany fa ny 80%-n’ny mponina dia mivelona amin’ny asa fambolena avokoa. Navoitrany manokana, fa ny any amin’ny faritra Atsimo andrefana iny mitombo hatrany ny vokatra, satria ny fanorenana ny tohodranon’i Bevoay, izay afa-manondrana anarivony hektara koa. Azo antoka fa hitombo avo telo heny ny voka-bary, raha ny fanampim-panazavany, saingy hatramin’izao aloha, mbola tsy nisy fiantraikany amin’ny tsena anatiny izany fampandriana adrisa tanterahin’ny filoham-pirenena izany.
Kobaka am-bava sy volana an-tenda avokoa ny resaka ataon’ny Filoham-pirenena, tamin’izany fotoana. Miharihary toa vay an-kandrina ka sady maharary no mahamenatra, raha tsy hiresaka ny zava-misy ankehitriny, amin’ity resaka vidim-bary ity. Raha ny antontanisa tamin’ny fanafarana vary, ny taona 2013, nahatratra 700 197 taonina, saingy nihena 77 000 taonina izany ny taona 2015. Tsy noho ny voka-barin’i Madagasikara nihatsara akory no anton’izany fa noho ny fahantran’ny Malagasy, izay tsy mahavita misakafo intelo isan’andro intsony. Nihena ny fandaniana tanterahin’ny tokantrano malagasy, izay nisy fiantraikany amin’ny ativilaniny, mifanindran-dalana amin’ny fahantrana miseholany eto amin’ny firenena. Voasokajy ho isan’ny firenena mahantra indrindra eran’izao tontolo izao i Madagasikara, raha ny laharana navoakan’i FMI.
Manoloana izao fahantrana mihalalina izao, miezaka ny manala fanaintainan’ireo vahoaka marefo ny fitondrana, amin’ny alalan’ny fizarana vary 1 kilao, toy ny zava-nisy teny amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina, ny zoma lasa teo. Fiarovan-tena sy fitazoman’aina sisa no kendren’ity fitondrana ity amin’izao fotoana izao. Mitombo an-dalana hatrany ny fahoriam-bahoaka, amin’ny resaka delestazy sy ny fiakaran’ny vidin-javatra maro samihafa. Ny karama anefa tsy hahasahana momba izany intsony. Raha misy moa faharariana tampoka, angamba ny vatampaty no homanina satria tsy ho taka-bidy intsony ny vidim-panafody, indrindra raha lasa eny amin’ny hopitalim-panjakana.